Juan Mata oo door kulahaa sababihii Garsoore Mark Clattenburg uu horyaalka Ingiriiska isaga dhaqaaqay
Thursday, January 24th, 2019 - 14:02:54
Saturday February 18, 2017 - 17:41:43 in Wararka by Kubad Bile
Xidiga khadka dhaxe ee Manchester United Juan Mata ayaa qeyb ka ciyaaray Mark Clattenburg inuu go'aansado in uu soo gabagabeeyo waqtigiisa garsoorenimo ee Premier League, Arinta waxaa qeyb weyn ku luglahaa Juan Mata, Sida uu sheegay taliyaha garsoorayaashii hore 'Heith Hackett.
41-sano jirkaan ayaa si layaab leh u dhex-dhaxaadiyay fiinaalada Euro 2016, FA Cup ka iyo Finalka Champions League, isagoo si layaab leh isbuucaan loogu dhawaaqay inuu u dhaqaaqi doono Saudi Arabia.
Heckett ayaa sheegay in Clattenburg uu ka niyad jabay taageera la'aanta uu kala kulmay saraakiisha waaxxda garsoorka Ingiriiska, gaar ahaan falkii dhacay 2012 markii ay Chelsea garsoorahan ku edeysay inuu fal cunsurinimo kula kacay Juan Mata iyo saaxibkiis John Obi Mikel.
"Waa war u xun garsoorayaasha ingiriiska, Premier League wuxuu lumiyay garsooraha ugu wanaagsan caalamka, Waa dhabar jab weyn," Ayuu usheegay Daily Star.
"Waxaan qabaa inuu hoos u dhacay maamulka. "Waxaa jirtay dhacdooyin markii PGMOL aysan taageerin ama go'aanada marka loo baahanyahay, Mark wuu dareemay kadib dhacdadii Mata in halqofna uusan taageereen isaga, Wuxuu tagay sare iyo isagoo qalalan"
W/ D: Owzebiyo